Kusolwa izinkinga kushiya umbhishobhi wamaKhatholika - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa izinkinga kushiya umbhishobhi wamaKhatholika
U-Archbishop Slattery uthi izinhlelo abese beziqalile zizoqhubeka njengoba bezihleliwe
UMBHISHOBHI uNeil Augustine Frank OMI osezophatha isiFundabhishobhi saseMariannhill emuva kokushiya kuka-Archbishop William Slattery obebambile isikhathi esingangonyaka.
KUSOLWA izinkinga ezikhungethe isiFundabhishobhi saseMariannhill, eThekwini njengembangela yokushiya kombhishobhi omkhulu wamaKhatholika, u-Archbishop Willian Slattery esikhundleni sokuhola lesi sifundabhishobhi abesasibambe isikhathi esingangonyaka. Isikhala esivulekile sesizothathwa nguCoadjutor Neil Augustine Frank OMI ongowokudabuka eMgungundlovu. U-Archbishop Slattery obesethathe umhlalaphansi, wafika ngo-2020, eMariannhill, eyokwelekelela umBhishobhi Mlungisi Dlungwane ukuxazulula izinkinga ezisihaqile, okuthe ibandla lisabhekile ukuthi yiluphi ushintsho afika nalo njengoba ebesanda kushintsha ofata ebatshala kabushan ezimishini wahamba.
Kuphethe u-Archibishop Slattery eMariannhill, lesi sifu-ndabhishobhi esithathwa njengesikhulu KwaZulu-Natal, sakhungathwa yizinkinga okubalwa kuzona nemibhikisho yamakholwa ase-Assisi, ePort Shepstone ayemelene nokushintshwa kukafata, uNtuthuko Mtshali. Ngokusho komthombo ongaphakathi, u-Archbishop Slattery uhambe engakaxazululi neyodwa ezinkingeni abebesabheke ukuba azixazulule. “Yize ebesemdala, kodwa besi methemba ukuthi uzokwenza ushintsho olubonakalayo. “Manje njengoba esehambile, sibona kusazothatha esinye isikhathi ukungena kwamacala angaphakathi abesefakiwe,” kusho lo mthombo. Eziphendulela u-Archbishop Slattery, uthe yize ezogcina ukusebenza ngoNhlolanja (February) eMariannhill, ngokwakhe uzibone ewenze wonke umsebenzi abewujutshelwe eMariannhill.
“Uma kukhulunywa ngokwalusa ibandla, akulusi umuntu oyedwa, kodwa kunethimba osuke usebenzisana nalo.” Ukuthi mina ngiyahamba kakusho ukuthi izinhlelo ebeseziqalile ziyama, zizoqhubeka njengoba bezihleliwe. “Kuningi ebesesikwenzile yize umsebenzi siwuqale ngesikhathi esibi kuhlasela ukhuvethe sahanjelwa (kwashona) yinqwaba yezindela emishini yase Assisi.”Kunezinhlelo esizivuselelile zokusiza abampofu, sasebenza kanzima ukuthi kugcotshwe ofata abane obekumele bagcotshwe. Sabagcoba ngoZibandlela (December) eKevelaer Mission, abanye kumele siqhubeke nokubagcoba njengoba kuqala unyaka,” kusho -u-Archbishop Slattery.
UCoadjutor Frank osezoqhoqhobala lesi sikhundla uneMasters kwisayensi ayithola e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), wagcotshelwa ubufundisi ngo-1999. Wake wafunda naseIndia, waphatha nasesikoleni okufundelwa kusona ubupriste, iSt Joseph Theological Institute, eseCedara njengoba esezophatha isifundabhishobhi.
Previous articleKuzohlomula osomabhizinisi bendawo ngezinhlelo zemeyaIthi
Next articleKufezeke eleMbube ngoSimakade